Isigqoko lesikhumba sokuqala esinesibopho sokuvulela esivulekile Isikhumba seFlip Flip seBlackBerry Q5 — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele BlackBerry Q5 ‎ → ‎
Isigqoko lesikhumba sokuqala esinesibopho sokuvulela esivulekile Isikhumba seFlip Flip seBlackBerry Q5
Ivikela kakhulu iBlackBerry yakho kuzo zonke izinhlobo zomonakalo. Ngokokuqala ngqa, isibonakaliso sokuxwayisa sihlala sibonakala kuleso cala esivaliwe! Umklamo we-Laconic wesitayela sebhizinisi, ukuthungwa okuhle.
Isigqoko sesikhumba sokuqala esinesibopho sokuvulela esivulekile Isikhwama se-Flip Shell yeBlackBerry Q5 ngangokunokwenzeka sikwazi ukuvikela i-BlackBerry yakho kuzo zonke izinhlobo zokulimala: ama-bumps, ukukhwabanisa, ukungcola, uthuli nomswakama. Okokuqala, isibonakaliso sokuxwayisa sihlala sibonakala kuleso cala esivaliwe —, okusho ukuthi uzohlala uxhumana njalo ngaphandle kwemilayezo ebalulekile!
Ngaphakathi kweso senziwe ngesimo sepulasitiki, ukuze ifoni ihleleke kahle, futhi ibuye ivikeleke ngokuthembekile. Kukhona izimbobo zazo zonke izikebhe, izinkinobho, amakhamera, okusiza kakhulu ukufinyelela kubo. Indwangu encane engaphakathi ngaphakathi esihlalweni sayo iqeda ukukhwabanisa nokuzibamba esikrinini uma usebenzisa ikhava. Ukuqapha okuhlukile kufanele kulungiswe ukumboza phezulu: kwenziwa ngesimo esikhulu, okubili okulula kakhulu futhi okunokwethenjelwa. Isembozo kulula ukuvula ukunyakaza okulodwa, futhi ukufinyelela kwesikrini nekhibhodi kuvulwe: ungasebenza ngefoni ngaphandle kokukhipha ikhava.
Isikhwama se-Leather Flip sisekela umsebenzi we-magnetic BlackBerry: ngaphakathi kwekhava kukhona inzwa yamagnetic esebenza ngokushesha nje lapho ivaliwe, futhi lokhu kuvimbela ukukhanya kwesikrini futhi ukuvala ikhibhodi, ngaleyo ndlela kulondoloze amandla webhethri. Ngokushesha nje lapho uvula isembozo, i-smartphone iphinda ivule futhi.
Isembozo sinomthombo omuhle kakhulu wendlela yayo: manje ungabona isimo se-LED yakho inkomba ngaphandle kokuvula ikhava! Lokhu kungenzeka, ngenxa yomgodi omncane ngaphansi kobukhulu benkomba phambi kwekhava. Uyazi njalo uma umlayezo weza kuwe (isibonakaliso sibonakala sibomvu) noma yisikhathi sokushaja ibhethri (ukukhanyisa amber).
Isikhumba sokuqala esikhumba nesembozo sokuvula esivulekile seShell Flip Shell yeBlackBerry Q5 sinomklamo ocacile, ukuthungwa okuhle nemigqa ebushelelezi. Isembozo esinjalo sihambisana nesitayela sebhizinisi.
Isigqoko lesikhumba sokuqala esinesibopho sokuvulela esivulekile Isikhumba seFlip Flip seBlackBerry Q5, Omnyama (Omnyama) ACC-54689-101 (ASY-54687-001) ●
Isigqoko lesikhumba sokuqala esinesibopho sokuvulela esivulekile Isikhumba seFlip Flip seBlackBerry Q5, Mhlophe ACC-54689-102 (ASY-54687-002) ●
Omnyama (Omnyama) ACC-54689-101 (ASY-54687-001)
Mhlophe ACC-54689-102 (ASY-54687-002)